PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-12-06 - AmaWisile akuGatyana acetyiswe ngezomthetho
AmaWisile akuGatyana acetyiswe ngezomthetho
Isolezwe lesiXhosa - 2018-12-06 - IINDABA - SITHANDIWE VELAPHI
LICEBISO lezomthetho ebekufanele ukuba lityabule amawaka angamashumi amabini eerandi (R20 000) kwirhamente yaseWisile kuGatyana, kwisekethe yamaGcaleka, kodwa oku kwenziwe simahla ngamagqwetha amabini ale dolophu.
UThabo Mantyi, igqwetha elibalasele kwimiba yezimali, kwanoAdvocate Mthunzi Mhaga – osele eligqwetha elizimeleyo emva kokusebenzela umbuso – bandwendwele le sekethe ukuya kucebisa irhamente ngemiba eliqela emayelana nomthetho.
Ukusuka kumatyala ngokohlukana kwawo, ukuya kwimiba yoqhawulomtshato kuquka nokwenza imiyolelo – irhamente yamaWisile ithe yazuza iingcebiso zomthetho.
UMhaga noMantyi, iinzalelwane zakuGatyana, ngamagqwetha aziqhayisa ngelithi akhulele kule sekethe yamaGcaleka noxa nje uMhaga esithi bavame ukuya enkonzweni mhla iyiPasika.
Beze kule nkonzo emva kothethwano noMfundisi uHlanganisa Mbanjwa, okhokela le sekethe.
“Lo mfundisi (Mbanjwa) ebesoloko esecaleni kwam kule minyaka imbalwa idlulileyo endithandazela kwimibandela yam. Emva kokuba ndibone iziphumo zomthandazo ndigqibe kwelokuba ndize apha ndizokutyala ulwazi endinalo.
“Yiyo le nto ndigqibe kwelokuba ndisebenzisane noThabo Mantyi kuba yena uligqwetha elibalasele kwimiba yamatyala nezimali, eyona nto igqiba abantu bakuthi,” utshilo uMhaga.
UMantyi uthi abantu amatyala bawenza bekuxinizelelo befuna imali ekhawulezileyo.
“Xa wenza ityala, jonga ukuba uza kukwazi na ukulihlawula. Xa urhola iR7 000 ngenyanga, ulithathelani ityala leR13 000?
“Into esiyiqapheleyo kukuba abantu bakuthi abazifundi izivumelwano phambi kokuba batyikitye kula matyala,” utsho uMantyi.
Lo kaMantyi ubalule ezona zizathu zibangela uluntu ukuba lubhaliswe phantsi komqulu wabo bangahlawuli matyala.
“Xa umane utsiba iinyanga xa uhlawulayo okanye ufake isicelo sokuba kudityaniswe amatyala akho, maxa wambi kuthatyathwe isigqibo yinkundla malunga netyala lakho, uyakwazi ukuba ufakwe phantsi komqulu wabo bangahlawuliyo.”
Uphuma njani ke ngoku kulo mqulu? “Ungaya enkundleni okanye udibane negqwetha ukuze kuthunyelwe imbalelwano kwiCredit Bureau,” utsho uMantyi.
Phakathi kwemibuzo ebuzwe yirhamente, yimiba efana nebheyile xa ubani ebanjiwe kwanokuba ingaba izigwebo zithatyathwa ngokufanayo kusini na nomonakalo. Abanye babuze ngomba wentsangu.
Xa ufuna ukujonga ubume bakho ngokwamatyala okanye ukuba limi njani igama lakho kwaCredit Bureau ungacofa le nombolo *120*8801# emva koko ulandele imiyalelo.
UMfundisi Mbanjwa uthi oku kwenziwe nguMhaga noMantyi kuyincedile irhamente yakhe.
“Ezinye zezinto ezimayelana nomthetho zikude kuluntu lwakuthi. Siyalivuyela kakhulu eli nyathelo likaMthunzi noThabo.”